Akeekkachiisa burjaajii! – ኢትዮጵያ ቼክ
Burjaajiin gama bilbila harkaa /mobaayilaan/ raawwatamu yeroo gara yerootti baramaa ta’aa dhufeera.
Namootni hedduus dhimma kana irratti odeeffannoo akka isin biraan geenyu nugaafachaa turtan.
Burjaajiin kun maamilli Itiyoo Telekoom tokko maamila biraatti ergaa barreeffamaa sobaa erguun maallaqni yookin yeroon qilleensaa /airtime/ akka ergamuuf gochuun kan raawwatamudha.
Wayita maammilli tokko gama bilbila harkaa /mobaayila/ isaatin maamila biraaf maallaqa yookin yeroo qilleensaa kennu dhaabbatni Itiyoo Telekoom immoo ergaa barreeffamaa mirkaneessituu erga.
Ergaan barreeffamaa mirkaneessituu kunis lakkoofsa dhaabbata Itiyoo Telekoom 994 irraa kan ergamu dha.
Haa ta’u malee burjaajessitootni ergaa dhaabbatni Itiyoo Telekoom ergu ‘copy’ gochuun yookin fakkeessanii barreessuun gara lakkoofa bilbilaa maamila isaan burjaajessuu barbaadanitti ergu.
Ergaan kunis “maallaqni haganaa yookin kuufamni yeroo qilleensaa haganaa sif ergameera” kan jedhudha.
Sana boodas burjaajessitootni nama ergaa barreeffamaa itti erganitti bilbiluun “dogongoraan kaardii mobaayilaa yookin yeroo qilleensaa sitti ergeera waan ta’eef naaf deebisi” jechuun gaafatu.
Maamiltootni Itiyoo Telekoom tokko tokkos maallaqa yookin yeroo qilleensaa itti hin ergamne gara lakkoofsa bilbilaa burjaajessitootaatti ergu.
“Burjaajessitootni akkuma ergaa gabaabaa namatti erganiin dafanii bilbilu. Kunis namni isaan burjaajessuu barbaadan yeroo waa’ee dhimmichaa itti yaadu yookin xiinxalu akka hin arganneefi” jedhu Itiyoo Telekoomitti manaajara Hooggansa Opireeshinii Burjaajii kan ta’an Salaamaawit Asaffaa.
Maallaqni yookin yeroon qilleensaa maamila tokko irraa gara maamila biraatti yeroo ergamu ergaan barreeffamaa mirkaneessituu kan ergamu gama lakkoofsa dhaabbatichaa 994 qofa akka ta’es Itoophiyaa Cheekitti himaniiru.
Dhaabbatni Itiyoo Telekoom burjaajessitoota irratti tarkaanfii fudhachaa akka jiru kan himan Salaamaawit Asaffaa, tarkaanfiin fudhatamus tajaajila maamilli sun argatu adda kutuufi dhimmicha qorachuunis maamilicha gara qaama seeraatti geessuu akka ta’es dubbatan.
Maamiltootni burjaajessitoota yoo argan lakkoofsa bilbilaa Itiyoo Telekoom 994 irratti bilbiluun, waajjira Itiyoo Telekoom dhiyeena isaaniitti argamu qaamaan deemun akkasumas gama miidiyaalee hawaasummaa dhaabbatichaa kunneen akka Feesbuukiifi Tiwiitaraan eeruu kennuu akka danda’anis himaniiru.